Anọ Point Contact Ball biarin - China Ningbo Shenhe agba
Anọ ebe kọntaktị bọl amị bụ ụdị abụọ direction otu n'usoro angular kọntaktị bọl amị. N'ihi na ahụkebe imewe nke raceway grooves nke obi mgbanaka na elu mgbanaka, e nwere abụọ kọntaktị ihe n'etiti onye ọ bụla raceway uzo na a obi ụtọ. Kọntaktị n'akuku bụ 35 Celsius. Ndị a biarin na-enwe ike na-ebu axial ibu na abụọ ntụziaka. The ọsọ ókè nke ndị a biarin dị nnọọ elu na ha n'ụzọ pụrụ iche adabara onye iro elu na-agba ngwa.
d D B rsmin 动 ČR 静 Cor
A anọ mgbe kọntaktị bọl amị na-emi esịnede otu elu mgbaaka na "peach udi" ngalaba raceway uzo, a ụzọ abụọ-ibe n'ime mgbanaka, na onye na nzukọ f bọl setịpụrụ na a machined ọla onu, akpụ anọ mgbe kọntaktị. The anọ mgbe kọntaktị bọl biarin na-bụ-eji na ngwa nke igwe ngwaọrụ, ike transmissions nke nnukwu dizel engines ka na-akwado ma na-ebu elu nzube ibu.
Previous: Ugboro abụọ Ahịrị Deep uzo Ball biarin
Next: Self-kwado Ball biarin
Kpọtụrụ Ball Iburu
Anọ Points Contact Ball Iburu